Weeraryahanka Chelsea ee Eden Hazard oo ogolaaday heshiis shan sanadood ah uu ugu biirayo kooxda Real Madrid – Gool FM
Weeraryahanka Chelsea ee Eden Hazard oo ogolaaday heshiis shan sanadood ah uu ugu biirayo kooxda Real Madrid
(London) 23 Maarso 2019. Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa la soo warinayaa inuu diyaar u yahay inuu ogolaado heshiis shan sanadood ah oo uu ugu biirayo real Madrid, waxaana uu isku diyaarinayaa inuu xagaagan u dhaqaaqo garoonka Bernabeu.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa muddo dheer la la xiriirinayey inuu u dhaqaaqi doono Caasimadda Waddanka Spain, isagoo aan marna wax qarsoodi ah ka dhigin rabitaankiisa ah inuu matalo Madrid marxaladda heerkiisa ciyaareed.
Warsidaha ka soo baxa Spain ee Sport ayaa warinaya in Hazard uu durba heshiis waqti dheer oo shan sanadood ah la gaaray naadiga Los Blancos, kaasoo uu sanadkiiba ku qaadan doono 14 milyan oo gini.
Yeelkeede, Madrid ayaan weli heshiis la gaarin Chelsea, kuwaas oo xitaa ka cago-jiidaya inay waayaan xiddigooda weerarka ka ciyaara maadaama FIFA ay ganaax ku soo rogay labada suuq kala iibsi.
Blues ayaa laga yaabaa inay ku jahwareerto Hazard oo qandaraaskiisa uu dhacayo sanadka soo socda ee 2020, waxaana la fahamsan yahay inuu Madrid siin doono iftiinka cagaaran si ay u bilaabaan wadahadal ay kula soo wareegayso xagaaga.
Hazard ayaa shaaca ka qaaday inuu ka tagayo gegada Stamford Bridge isagoo ka hadlay sida uu ugu faraxsan yahay Macallin Zinedine Zidane horraantii isbuucaan, waxaana tababaraha Real Madrid uu durbadiiba la xiriiray weeraryahanka.
Zidane ayaa rajeynaya in 28-sano jirkaan Hazard uu weerarka kooxda Real Madrid hoggaamin karo si la mid ah Cristiano Ronaldo, kaasoo ka tagay kooxda xagaagii la soo dhaafay.
Hazard ayaa dhaliyey 105 gool 339 kulan oo uu ciyaaray tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda Chelsea sanadkii 2012-kii.
ARAG: Sida ay u muuqan doonto Shaxda kooxda Liverpool haddii uu ku soo biiro Dybala… (Saalax, Mane iyo Firmino kee ka bixi doona Booska???)
Smalling oo ka jawaabay xaqiiqada ku aadan wareysigii uu kaga hadlay Lionel Messi